LALAO MIVERINA CHAN 2020 : Efa lasa nanafika any Namibie indray ny Barea
Niara-nanainga ny alakamisy tamin’ny 3 ora maraina teny Ivato ny ekipam-pirenena roa tonta dia ny Barea baolina kitra hifanandrina amin’i Namibie amin’ilay fiadian-toerana hiakarana amin’ny Chan 2020 any Cameroun sy ny Barea Kick-Boxing handray anjara ho fiadiana ny tompon-daka maneran-tany any Russie. 18 octobre 2019
Tsiahivina fa efa nandresy tamin’ny isa tokana noho aotra isika teto an-tanindrazana tamin’iny volana septambra iny ka raha manao ady sahala fotsiny any Namibie dia efa fandraisana anjara voalohany amin’ny ekipam-pirenena tsy mampilalao mpila ravinahitra izay. Ny voloana janoary izao moa no hanatanterahana ny dingana farany any Cameroun.
Ny fahitana ny Barea Chan teny amin’ny kianja Elgeco-Plus By-Pass tamin’ny sabotsy teo tokoa dia nahabe fanantenana ary nanome hery ireo mpikatroka Malagasy. Tazana teny, ohatra, ny Dtn sady mpanazatra ny ekipam-pirenena A, Nicolas Dupuis. Inoana fa tsy maintsy nanana teny nampitaina tamin’ny mpanazatra ny Barea B izy. Teny ihany koa ny avy ao amin’ny federasion’ny kitra Malagasy notarihin’ny filoha lefitra Andriamanampisoa Alfred ary ny avy eo anivon’ny ligin’Analamanga notarihin’ny filohany. Betsaka ihany koa ireo mpankafy tonga teny ary saika ny 90 isan-jaton’ny toerana no fenon’izy ireo. Mahatratra 29 moa ny isan’ny delegasiona mandrafitra ny ekipam-pirenena nanainga ny alakamisy teo io.
Ireto avy kosa ireo mpilalao narafitr’Andriamanarivo Francklin hanatevina ny Barea Chan :
Rakotohasimbola Razakanirina (As Adema)
Andriamalala Andoniaina Fanomezantsoa(Cnaps)
Njakanirina Sandratriniana Tobisoa(Cnaps)
Ratahinjanahary Tojosoa Patrick(Ajesaia)
Rakotonirina Jean Martin(Adema)
Razafindrabe Arari Mihanta Rija Nirina(Zanakala)
Andriamanajato Tokifandresena Rojolalalaina(Ajesaia)
Ramahandrison Niaina Tsilavina(Elgeco)
Rakotondrazaka Andrianavalona Andoniaina(Cnaps)
Richard Marcel(Jet Mada)
Marobe Jean Claude(Fosa)
Rakotoarisoa Baggio Jean Romario(FFosa)
Rafenoharisoa Maminiaina Safidy(Elgeco)
Razafindrasata Tsito Nasandratra (Jet Mada)
Razafindrakoto Jean Yves(Fosa)
Mbolatovo Elio Alexis(Zanakala)
Ramananandro Andrianiaina Danielson(Fosa).